UFederico Moccia: izincwadi | Izincwadi Zamanje
I-Encarni Arcoya | 14/10/2021 08:09 | Amabhuku
Umthombo wesithombe wezincwadi zikaFederico Moccia: Pinterest
Khuluma ngakho UFederico Moccia futhi izincwadi zakhe ukukwenza kusuka kumbhali oke waba ngumholi ekuthengisweni kwamanoveli kwentsha. Eqinisweni, kuthiwa kungenxa yezindaba zabo ukuthi uhlobo olusha lwabantu abadala lwavela, izingqikithi zabantu abadala kepha zatshelwa ngendlela yokuthi izingane ngokwazo zazizazi ngendlela "ethambile".
Eminyakeni edlule, uFederico Moccia uzenzele igama phakathi kwabakhulu, futhi noma yinini lapho ekhiphe incwadi kube yimpumelelo, hhayi ezweni lakhe kuphela, kodwa cishe nasemhlabeni wonke. Kepha yiziphi izincwadi anazo uMoccia? Luthini udaba ngemuva kwalo mbhali? Thola konke okungezansi.
1 Ngubani uFederico Moccia
2 Izincwadi zikaFederico Moccia
2.1 Saga Amamitha amathathu ngaphezulu kwesibhakabhaka
2.2 Saga Uxolo uma ngikubiza ngothando
2.3 Saga Tonight ngitshele ukuthi uyangithanda
2.4 Saga Lowo mzuzu wenjabulo
2.5 Amanoveli azimele
Ngubani uFederico Moccia
Into yokuqala okufanele uyazi ngoFederico Moccia ukuthi ukuthanda kwakhe kweqiniso, ngaphambi kokuba izincwadi zingene empilweni yakhe, kwakuyithelevishini kanye ne-cinema. Futhi akuyona into encane, uma sibheka ukuthi ubaba wakhe nguGiuseppe Moccia, uPipolo, umbhali wefilimu nomabonakude, usopolitiki kanye nomqondisi wamafilimu amaningi nezinhlelo ze-TV.
Konke waphila ebuntwaneni bakhe ezungezwe yibhayisikobho ukuthi ubaba wakhe wamfaka futhi wakhombisa, yingakho, lapho esemdala ngokwanele ukuthi angasebenza, wakhetha njengombhali wesikrini kumahlaya ase-Italy. Ngokuqondile, ungathola izinkomba kuye kumabhayisikobho kusukela kuma-70s naku-80s.
Uqale ukusebenza njengomsizi kumqondisi we-Attila flagello di Dio, ifilimu kayise.
Nokho, Eminyakeni emihlanu kamuva wazethula nge-movie, uPalla al centro. Inkinga ukuthi impumelelo kayise ayizange iphindwe kuye, futhi le filimu ayizange ibonwe, kangangoba uFederico Moccia uthathe isinqumo sokushintsha i-cinema yethelevishini, into abekade eyenza ngonyaka owedlule, lapho abamba khona iqhaza njengombhali isizini yokuqala yabafana besithathu. Ngo-3 wayengumqondisi nombhali wombhalo waseColegio futhi lona waba nempumelelo ethe xaxa.
Ngakho-ke, waqala ukuhlanganisa ithelevishini, ukubhala imibhalo yezinhlelo eziphumelelayo, kanye ne-cinema.
Futhi noma kunjalo, uFederico Moccia wenza isikhathi sezincwadi zakhe. Kwakungo-1992 lapho eqeda ukubhala amamitha amathathu ngaphezulu kwesibhakabhaka, okwakuzoba inoveli yakhe yokuqala. Futhi, njengoba kwenzekile kubabhali abaningi, ubenezinkinga ezanele kunoma yimuphi umshicileli anqume ukumethemba. Ngakho-ke uthathe isinqumo sokuzishicilela yena nomshicileli omncane. Ngesikhathi salolo hlobo, le ncwadi ayizange isuke, futhi uMoccia wagxila emsebenzini wakhe nebhayisikobho, nefilimu iMixed class 3ª A. Futhi ngaphandle kwempumelelo.
Ubuyele kuthelevishini kodwa, ngo-2004, kwakumele ayishiye nini incwadi yakhe yokuqala yaqala ukugqama ngemuva kweminyaka engu-12 ishicilelwe. Lokho kusho ukuthi, impumelelo yafika kuye, yaba yinto eyenzeka ezikoleni zamabanga aphakeme zaseRoma, futhi ukusuka lapho yahunyushelwa ezilimini eziningi futhi yashicilelwa emazweni ahlukahlukene njenge-Europe, Japan, Brazil ... Ngalowo nyaka le ncwadi ibuye yazivumelanisa ne-cinema, yaqala ngokushesha, futhi yaphakamisa inoveli ngokwengeziwe.
Vele, ngaleso sikhathi uFederico Moccia waphendukela ohlangothini lwakhe lwezemibhalo, wazama inhlanhla ngenoveli yesibili, nginesifiso ngawe, ukulandela inoveli yakhe yokuqala, futhi ngempumelelo efanayo nalena, ukujwayela kwafakwa.
Lezo zincwadi ezimbili zaziyisiqalo nje sesimo seMoccia, futhi yilezi ezilandelayo ezaphuma zanqoba futhi kuze kube namuhla.
Izincwadi zikaFederico Moccia
Uma ufuna ukufunda ifayela le- Izincwadi zikaFederico Moccia ukuze, ke lapha siwaphawula ukuze ungaphuthelwa yilutho. Khumbula ukuthi iningi lazo livela kumasaga, okungukuthi, liqukethe okungenani izincwadi ezimbili. Ngemuva kwalokho unabazimele abathile, yize bengaziwa kangako.
Saga Amamitha amathathu ngaphezulu kwesibhakabhaka
Iqukethe izincwadi eziningana: "Amamitha amathathu ngaphezulu kwesibhakabhaka", "Ngiyakufuna", "Kathathu wena", "Mina noBabi".
Lesi sakamuva empeleni siyindaba, akuyona inoveli, kodwa sihambisana nendaba nabalingiswa abavela kulesi saga.
Le noveli isethulela iqembu labangane, ngobuntu babo kanye nokudlula kwabo ebusheni baye ebudaleni, bezama ukuthola indawo yabo emhlabeni. Ama-protagonists aphila indaba yothando ngesitayela se-Romeo ne-Juliet esimsulwa, kepha sesimanje.
Saga Uxolo uma ngikubiza ngothando
Ihlanganiswe nezincwadi ezimbili, "Uxolo uma ngikubiza ngothando" nokuthi "Uxolo kodwa ngifuna ukukushada." Kwakungenye yempumelelo enkulu yombhali futhi iqiniso ukuthi kwabaningi kungcono kunamanoveli akhe okuqala.
Kukhona incwadi yesithathu, "Ufuna Ngokulangazela UNikki", kepha ayikahunyushelwa olimini lwesiSpanish futhi abalandeli bochungechunge kuphela abaziyo ngobukhona bayo.
Indaba ikhuluma ngothando phakathi kwezithandani ezinomehluko omkhulu weminyaka nezithiyo okufanele zinqobe ukuze ekugcineni zijabule, zombili zabangani, zomndeni, njll.
Saga Tonight ngitshele ukuthi uyangithanda
Yakhiwe izincwadi ezimbili: "Ngitshele kulobubusuku ukuthi uyangithanda" kanye "nobusuku obuyinkulungwane ngaphandle kwakho."
Kulokhu, i-protagonist ingumfana kakhulu, uNicco, osanda kulahlwa yintombi yakhe futhi ohlangana ngokungazelelwe nabesifazane ababili abasebasha baseSpain aqala ukuzizwa nokuthile okungaphezu kokuheha. Kuze kube bayanyamalala.
Saga Lowo mzuzu wenjabulo
Futhi enezincwadi ezimbili: "Leyo njabulo yenjabulo" nokuthi "Wena, wena nje."
Kule noveli, usethula kubalingiswa ababili abahluke kancane kokujwayelekile, ngoba umlingiswa ophambili ungomunye wabantu abacebe kunabo bonke emhlabeni kanti intombazane ingumlingisi wepiyano. Kepha kwenzeka okuthile okwenza izindlela zombili zinqamule.
Njengoba siphawule, phakathi kwezincwadi zikaFederico Moccia unezinye futhi ezizimele, okungukuthi, zinesiqalo nesiphetho. Lezi izi:
Ukuhamba. Mhlawumbe ingenye yamanoveli amangaza kakhulu ombhali, ngoba asijwayele le rejista. Kuyinoveli emfushane lapho akhombisa khona ngokushona kukayise.
UCarolina uthandana. I-protagonist yenoveli ineminyaka engu-14 ubudala, intombazane efana nabanye. Kuze kube yilapho ejoyina iqembu lamantombazane esikoleni samabanga aphezulu bese kuya emaphathini, ukuqabula, ubungani namasiko nothando lweqiniso luyaqala.
Ngabe kukhona okufundile okwenziwe nguFederico Moccia? Iyiphi incwadi oyithande kakhulu ngomlobi? Sazise!
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » UFederico Moccia: izincwadi
U-Emilio Lara. Ingxoxo nombhali weSentinel of Dreams